RAHARAHA FIFOFOANA NY AIN’NY FILOHA : “Tsy misy manana tombontsoa hanao sarimihetsika”, hoy ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 6:56
Ny Mpitondra tenin'ny Governemanta (sary fanehoana)
Accueil/Politika/RAHARAHA FIFOFOANA NY AIN’NY FILOHA : “Tsy misy manana tombontsoa hanao sarimihetsika”, hoy ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo
RAHARAHA FIFOFOANA NY AIN’NY FILOHA : “Tsy misy manana tombontsoa hanao sarimihetsika”, hoy ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo
Niainga avy any Fianarantsoa ny fandaharana Tsy ho Tompon-trano Mihono niarahana tamin-dRamatoa Lalatiana Andriatongarivo, Mpitondra tenin’ny Governemanta omaly. Fotoana izay nitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika ny raharaha fikasana hamono ny Filoham-pirenena. Nandritra izany no nilazany fa tsy sarimihetsika ity raharaha ity, ary betsaka ny porofo manamarina izany.
Lucien R. 31 juillet 2021
Hisy olona maty ve vao hino ny sasany hoe tsy sarimihetsika ity raharaha ity? Inona no tombontsoan’ny Fanjakana hanao sarimihetsika toy izany?. Ireo no fanontaniana napetraky ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, sady Mpitondra tenin’ny Governemanta, Lalatiana Andriatongarivo omaly raha namaly ireo olona milaza fa manao sarimihetsika fotsiny ny Fanjakana ao anatin’ity raharaha fifofoana ny ain’ny Filoha ity. Teratany frantsay sy Malagasy mizaka zom-pirenena frantsay no efa nosamborina sy ahiahina amin’ity raharaha ity, hoy izy, ka tsy hanaonao foana amin’izany ny mihitsy ny Fanjakana satria mety hisy fiantraikany amin’ny fifandraisana ara-diplomatika mihitsy izany. Matoa misy olona maro voakasika dia tsy sarimihetsika izany, hoy ny fanazavana. “Tsy hisy Fanjakana handeha hanangana ady amin’ny zandary, katolika sns, mihitsy”, hoy hatrany izy. Ny tenany izay nilaza fa maro ny vesatra eo an-tanan’ny mpanao famotorona ho an’ireo olona efa voatazona amin’ity raharaha ity, raha tsy hilaza afa tsy i Paul Rafanoharana. Ireny rehetra ireny no manamarina ny tsy maha sarimihetsika ny raharaha. Notsiahivin’ny Minisitra ihany koa ny fanambarana izay efa nataon’ny tomponandraikitra eo anivon’ny orinasa Madagascar Oil izay nanamarina fandraisana mailaka avy tamin-dRafanoharana Paul. Mailaka izay nangatahan’ity farany famatsiam-bola hatramin’ny 10 tapitrisa Euro hanatanterahana fanakorontanana sy fanonganam-panjakana eto amin’ny firenena. Loharanom-baovao hafa akaiky ny famotorana ihany koa no nahafantarana fa efa nisy ny fiaikena nataon’ity olona voarohirohy ity teo anatrehan’ny famotorana.
Tsy olon’ny tetezamita
Nandiso ny filazana ny maha mpanolontsain’ny Filoha Andry Rajoelina an’ingahy Paul Rafanoharana fony izy nitantana ny Tetezamita ihany koa ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo. “Izaho anisan’ireo fito tao anatin’ny kabinetran’ny Filoha, ary afaka manamarina fa tsy anisan’ny mpanolontsain’ny Filohan’ny Tetezamita tamin’izany fotoana i Paul Rafanoharana”, hoy ny fanazavany. Ny mpanolontsain’ny Filoha no nisy akaiky azy, raha ny fanazavana, fa izy dia tsy voatendry tamin’ny alalan’ny didim-panjakana. Mbola mitovy amin’izany ihany koa ny fifandraisany amin’ny Arsevekan’Antananarivo. Diso, noho izany, ny filazana fa efa nisy fikasana hametraka an’I Paul Rafanoharana ho eo amin’ny toeran’ny Praiminisitra ny Fanjakana.
Tsy voatery meloka rehefa hadihadiana
Ankoatra izay, nanazava ihany koa ny Mpitondra tenin’ny Governemanta manoloana ireo olona maro hanaovana famotorana ankehitriny, fa tsy midika fanamelohana akory ny fihainoana. Izany hoe, raha hanaovana fanadihadiana ny olona iray dia tsy midika mihitsy akory fa meloka avy hatrany. Saika niteraka resabe tokoa mantsy, raha tsiahivina, ny famotorana natao an’i Sareraka, sy ny Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona. Ireo olona ireo izay heverin’ny mpanara-baovao fa akaiky ny Fitondrana. Na izany aza, nilaza ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo omaly fa tsy tokony ho atao fialana tsy hanaovana famotorana olona iray ny anarana hoentina amin’ny maha mpanao politika azy na amin’ny maha mpitarika ara-pivavahana azy, na ihany amin’ny maha mpitandro filaminana satria mitovy avokoa ny rehetra eo ambanin’ny lalàna.
Tsy familiana saim-bahoaka
Hatramin’ny niandohan’ity raharaha ity, tsy vitsy ireo nilaza fa familiana ny saim-bahoaka ataon’ny Fanjakana fotsiny ihany izao zava-misy izao mba tsy hifantohan’ny olona amin’ny fahasahiranana. Omaly, nilaza ny Mpitondra tenin’ny Governemanta fa tena mifantoka tanteraka amin’ny olam-bahoaka ny Fanjakana ankehitriny, raha tsy hilaza afa-tsy ny famahana ny olan’ny lalam-pirenena faharoa izay efa nahitan’ny Fitondram-panjakana famatsiam-bola hatramin’ny 200 tapitrisa dolara. Mbola misy dingana maro be anefa ny fisitrahana izany vola izany, ka tsy maintsy hatomboky ny Fanjakana ao anatin’ny Fond routier aloha ny fanamboarana ny RN2. Miasa ny Fanjakana, hoy izy, manam-porofo izany ny fahatongavan’ny vary nafaran’ny orinasa SPM izay hamatsy ireo tsena mora eto amintsika. Mitohy koa, hoy izy, ny fitsinjovana ny any Atsimo. Porofon’izany ny dian’ny Vadin’ny Filoha tany an-toerana ny herinandro lasa teo. Na izany aza, notsindrian’ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo fa anaty krizy ara-pahasalamana isika amin’izao fotoana fa tsy nitovy tamin’ny zava-misy tamin’ny 2015 na 2016. Isan’ny mampiakatra ny vidin’entana ihany koa ny fitaterana iraisampirenena mbola mikatona.
Zandarimariam-pirenena : Tontosa tamim-pirahalahiana ny famindram-pitantanana teo amin’ny Seg roa tonta
FILANKEVITRY NY MINISITRA: Nanendry Governoram-paritra vaovao telo
MINISITRA LALATIANA ANDRIATONGARIVO: « Nanao ezaka lehibe ny Minisitera hamerenana ny hasin’ny teny malagasy »